ဝိတ်ကျဖို့အတွက် ထိပ်တန်းအစားအစာ ၇ ခု | MyFood Myanmar
ဝိတ်ကျဖို့အတွက် ထိပ်တန်းအစားအစာ ၇ ခု
များနေတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကြောင့် ကိုကိုမောင်မောင်တို့က ငြူစူနေပါသလား။ ဝိတ်ကလည်း ကျချင် အစားကလည်း စားချင်ဖြစ်နေပါသလား။ အစားစားရင် ဝိတ်ချလို့ရတယ် ဆိုတာရော သင်သိပါသလား။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းဖို့အတွက် ထိရောက်တဲ့ လက်နက် ၇ ခု အောက်မှာ ရှိတယ်နော်။ ကြည့်လည်းကြည့် စားလည်းစားပေါ့။
ဟင် ပေါက်ပေါက်စားရင် ဝလာတယ် မဟုတ်ဘူးလား? မစိုးရိမ်ပါနဲ့ မဝပါဘူး။ ပေါက်ပေါက်ဟာ ပြောင်းဖူးကလာတယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ် အခြားသော အစားအစာတွေထက် နှံစားတွေကရတဲ့ အစားအစာတွေက ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းပေးပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ Cheese များတဲ့ Pop Corn မျိုးတော့ ရှောင်ရမယ်နော်။
ဒိန်ချဉ်က သောက်ရင် အသားအရေလှစေတယ်။ မျက်နှာလိမ်းရင် အဆီမပြန်ဘူး။ ဆံပင်ကို လိမ်းရင် ဆံပင်မကျွတ်ဘူး အဖျားနှစ်ခွဖြစ်တာ ကာကွယ်ပေးတယ်။ ဝိတ်လည်းကျစေတယ်တဲ့။ ကဲ မကောင်းဘူးလား။ တစ်နေ့ကို ဒိန်ချဉ် လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးစာ သောက်ပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်က အဆီတွေကို ချေဖျက်ပေးပြီး ဝမ်းလည်း မှန်စေပါတယ် ။
ပုစွန်ချစ်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါ။ ပုစွန်က အဆီပို မပါတာမို့လို့ ဝိတ်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ Vitamin B နဲ့ D လည်း ကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့် ပုစွန်ကိုလည်း ပုံမှန်စားပေးရင်း ဝိတ်ချနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
4. Cereal Oats
ကွေကာအုပ် အဖတ်လေးတွေပါ။ ကွေကာအုပ်ထုပ်တွေမှာ နို့မှုန့်သကြား ပါတတ်လို့ Oats အဖတ်ချည်းပဲ ရွေးဝယ်လို့ရပါတယ်။ မနက်စာအနေနဲ့စားပေးရင် ဝိတ်လည်းကျ ဗိုက်လည်းချပ် ဦးနှောက်ကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ မချိုမချဉ်လေးပေါ့။ Vitamin C ပါတယ် ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးတယ် အူလမ်းကြောင်းကိုလည်း အထောက်အကူပြုပြီး ဝိတ်ကျစေတဲ့အစားအစာလည်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
အဆာခံတယ် ဝိတ်မတက်ဘူး။ Vitamin A ပါလို့ မျက်စိအားတောင် ကောင်းသေး။
Allergic ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ မတည့်တာကလွဲရင် သူကလည်းစားကောင်းပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ကြမ်းလေးပေါ်မှာ Peanut Butter လေးသုတ် နွားနို့လေးနဲ့သောက် မနက်စာအတွက် ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်။ သူကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကို ဝိတ်မတက်စေပါဘူးတဲ့။ Diet မလုပ်နိုင်သူများအနေနဲ့ မိမိအဆင်ပြေရာ အစာရွေးပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနိုင်ပါတယ်။ Work out ပါတွဲလုပ်ပေးရင်တော့ အချိန်တိုအတွင်း သိသာတဲ့ရလဒ်တွေ ရလာပါလိမ့်မယ်နော်။
MyFood Myanmar2020-12-29T10:42:19+06:30December 8th, 2016|Health, Knowledge, Tips & Stories|